Degso GTA 5 (Grand Theft Auto 5) loogu talagalay Windows
Degso GTA 5 (Grand Theft Auto 5)
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (175.36 MB)
Degso GTA 5 (Grand Theft Auto 5),
Rockstar, abuuraha taxanaha GTA, wuxuu sii daayay Grand Theft Auto 5, ciyaartii ugu dambeysay ee taxanaha GTA, ama GTA 5 oo kooban, loogu talagalay PlayStation 3 iyo Xbox 360 bishii Sebtember 2013.
GTA 5 Faahfaahinta Ciyaarta
Rockstar wuxuu si rasmi ah ugu dhawaaqay bishii Juun 2014 inuu sii deyn doono nooca PC-ga ee ciyaarta ka dib marka lagu daro qunsuliyadaha, wuxuuna ku dhawaaqay inuu sii deyn doono GTA 5 PC version dayrta 2014, sida kulamadii hore ee GTA. Nooca GTA 5 PC, oo ay si aad ah u rajeynayaan ciyaartooydu, ayaa marka ugu horreysa lagu soo bandhigi doonaa habka GTA Online ee lagu qanciyo ciyaartoyda la soo dejiyey ka dib markii la sii daayay ciyaarta iyo dhammaan wixii cusbooneysiin ah ee loo soo daayay ciyaarta.
Grand Theft Auto 5, oo leh adduunka ugu weyn ee furan Rockstar ayaa horumariyay illaa iyo hadda, waxaa ku jira isbeddel xagjir ah marka loo eego ciyaarihii hore ee taxanaha. In Xatooyo Grand Auto 5, ma sii maamuli doonno hal halyeey oo keliya. Waxaa naloo siiyay fursad aan ku maareyno 3 geesiyaal oo kala duwan oo aan ugu kala badalno geesiyaashaas sida aan rabno Geesi kastaa wuxuu leeyahay sheeko nololeed gaar ah iyo awooddiisa gaarka ah. Xaqiiqda ah in geesiyaashu leeyihiin awoodo kala duwan waxay ciyaarta ku soo kordhinaysaa noocyo iyo xamaasad.
Taariikhda geesiyaasheena GTA 5, oo ka dhacda gobollada Los Santos iyo Blaine Country, waa sida soo socota:
Michael waa nin horay ula soo shaqeeyay xirfad bayaannimo oo uu horay uga dhacay bangiga. Isagoo haysta nolol qasan oo qoys, Michael wuxuu ku soo laabtay maalmihiisii ​​hore ee GTA 5.
Trevor, mid ka mid ah jilayaasha ugu qosolka badan ee ciyaarta, waa cilmi nafsi maskaxeed u diidan inuu ku noolaado wasakhda isla markaana leh xanaaq aan la xakamayn karin. Xaqiiqda ah in Trevor uu yahay saaxiib hore Michael wuxuu siinayaa qayb weyn sheekada.
Franklin, oo u taagan xiisaha uu u qabo gawaarida, waa halyeey da yar oo aan wax badan lug ku laheyn dembiyada ka hor. Nolosha Franklin way isbedeshaa markuu la kulmo Michael oo wuxuu dambi u galay.
Xatooyo Grand Auto 5 waxay siisaa cayaartoyda xorriyad aan caadi ahayn. Adduunyada ballaaran ee ciyaarta, waxaad ku isticmaali kartaa gawaarida sida helikabtarrada iyo diyaaradaha jet, iyo sidoo kale gawaarida dhulka sida baaskiiladaha, mootooyinka, gawaarida, basaska iyo taangiyada. Intaa waxaa dheer, ciyaarta cusub ee GTA, oo ka duwan ciyaarihii hore ee taxanaha, waxaan sidoo kale quusin karnaa biyaha hoostooda. Taasi waa sababta aan ugu baahan nahay inaan ka taxaddarno kalluumeysatada badda ku jirta.
Grand Theft Auto 5 sawirada si weyn ayaa loogu horumarin doonaa nooca PC-ga ciyaarta. Marka la barbardhigo noocyada PlayStation 3 iyo Xbox 360 ee ciyaarta, astaamaha sida taageerada xallinta sare, dahaadhka tayada sare leh, iyo aragti ballaadhan ayaa naga sugeysa ciyaarta.
In Xatooyo Grand Auto 5 waxaan leenahay xulashooyin habeyn badan si aan u habeyn karno geesiyaasheena. Waxaan ku soo ururin karnaa dharka iyo agabyada sida kabaha, gaab, surwaal, funaanado, funaanado, koofiyado iyo muraayadaha ciyaarta waxaanan ku dari karnaa dharkayaga. Sidoo kale, waxaan sameyn karnaa hub fara badan.
Nooca kumbuyuutarka ee Grand Theft Auto 5 ayaa la imaan doona aalad tafatirka fiidiyowga ah oo kaa caawin doonta inaad sameysid filimo adigoo adeegsanaya muuqaallo aad ku qabtay ciyaarta.
GTA 5 Talaabooyinka Soo Dejinta iyo Rakibaadda
Xusuusin: Waxaad kala soo bixi kartaa Grand Theft Auto 5 kombiyuutaradaada adoo ka galaya koontadaada Naadiga Bulshada adiga oo kaashanaya GTA 5 Setup file. Si aad u ciyaarto ciyaarta, waa inaad iibsatay ciyaarta oo aad ku dhaqaajisay ciyaarta koontadaada Naadiga Bulshada. Intaa waxaa sii dheer, waxaan soo bandhignay fikradaheena ku saabsan ciyaarta cusub ee ku soo socota mawduuceena ku saabsan iskuxirka markii la sii deyn doono GTA 6.
GTA 5 (Grand Theft Auto 5) Noocyada
Cabirka Faylka: 175.36 MB
Horumar: Rockstar Games
Wararkii Ugu Dambeeyay: 27-06-2021